भाइरल चियावाली भाग्य र भबिष्य हेर्न पहिलो पटक गुरुको साथमा पुगिन्, कस्तो छ उनको भाग्य र भविष्य ? हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
भाइरल चियावाली भाग्य र भबिष्य हेर्न पहिलो पटक गुरुको साथमा पुगिन्, कस्तो छ उनको भाग्य र भविष्य ? हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
April 1, 2021 AdminLeaveaComment on भाइरल चियावाली भाग्य र भबिष्य हेर्न पहिलो पटक गुरुको साथमा पुगिन्, कस्तो छ उनको भाग्य र भविष्य ? हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
काठमाडौं- माजिक सञ्जालमा भाइरल भएकी चियावाली भनेर चिनिएकी श्रृष्टिको घर परिवार कस्तो होला रु भन्ने सबैलाई लागेको थियो । उनी विहान ३ वजे नै उठेर आफ्नो सानो छोरीलाई पिठ्युमा बोकेर काम गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
उनको यो संघर्षको कथा सार्वजनिक भएपछि उनीबारे चर्चा सुरु भयो । उनको संघर्षको कथा अरुका लागि प्रेरणादायी बनेको छ । काठमाडौ जस्तो ठाउँमा सानो छोरी हुर्काउँदै सडकमा चिया बेच्दै गरेकी श्रृष्टिको कथा वास्तवमै प्रेरणादायी छ ।
जस्तो सुकै अप्ठेरोमा पनि आफ्नो कर्तब्य विर्सनु हुँदैन भन्ने कुराको उदाहरण उनले २ वर्षकी छोरीको भविष्यका लागि गरेको संघर्षले देखाउँछ । काम ठूलो सानो हुँदैन इमान्दारीता हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उनको संघर्षले देखाउँछ ।
आफुलाई धोका दिएका श्रीमान प्रति पनि श्रृष्टिको कुनै गुनासो छैन । उनै भाइरल चियावाली यति बेला गुरु पुस्कर खतिवडा सँग पहिलो पटक मिडियामा सामु जन्मकुंडली सहित देखापरेकी छिन् ।
उनी किन भइन त भाइरल रु के छ उनको भाग्य रु श्रीमान सँगको सम्बन्ध किन बिग्रियो रु अब मिलन भए के हुन्छ रु लगाएतका प्रश्नको जवाफ सहित भविष्यवाणी हेर्नुहोस् भिडियोमा:
बिहे गर्छु भने पछी आत्तिए मुन्द्रे , ‘फुलबुट्टे सारी’ गाउने अफ्रिकन गायिका ! हेर्नुुुुुहोस् (भिडियो सहित)
विबाहित पुरुषसँग होटलको कोठाभित्र मस्ती गर्दा गर्दै समातिइन् लोकप्रिय मोडल अञ्जली अधिकारी ! हेर्नुुहोस् (भिडियो सहित)…..
श्रीमती विदेश पठाएर नेपालमा मो’जम’स्ती, नगद ३ लाख लिएर श्रीमान अर्काकी बुढीसंग फ’रार ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस : चैत्र ०१ गते आईतबारदेखी चैत्र ०७ गते शनिबार सम्मको